दाङमा कुर्सीबाट लडेर पूर्वगाविस अध्यक्षको मृत्यु – AB Sansar
November 22, 2020 santoshLeaveaComment on दाङमा कुर्सीबाट लडेर पूर्वगाविस अध्यक्षको मृत्यु
दाङमा कुर्सीबाट लडेर पूर्वगाविस अध्यक्षको मृ’त्यु भएको छ । शनिबार साँझ ५ बजेतिर कुर्सीबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका तत्कालीन उरहरी गाविस अध्यक्ष रेशमबहादुर भण्डारीको उपचारका क्रममा राति ११ बजेतिर मृ’त्यु भएको हो ।
कुर्सीबाट लडेर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ निवासी ७६ वर्षीय भण्डारीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि भैरहवामा थप उपचार हुँदै गर्दा मृ’त्यु भएको हो । उहाँको टाउकोमा आन्तरिक रक्तस्राव भएको थियो । भण्डारी विगत लामो समयदेखि अस्वस्थ रहँदै आएको तुलसीपुर–११ का वडा सदस्य सुवास डाँगीले बताउनुभयो ।
हङकङ आगलागीमा परेर गम्भीर घा’इते भएकी १८ वर्षीया सुरेखा कँडेलको पनि नि’धन
नेपाली सेनामा विभिन्न पदमा नयाँ भर्ना खुल्यो (हेर्नुस् सूचना सहित) !
दशैंको बेला “लकडाउन” बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै गर्यो यस्तो सूचना जारी ! जान्नै पर्ने ;